Banyere Anyị - Dongguan Huan Lian Automation Equipment Co., Ltd.
---- igwe na-edenye aha na onye na-eweta ngwọta ngwugwu nwere ọgụgụ isi!
Dongguan Huan Lian Automation Equipment Co., Ltd. dị na ama obodo n'ichepụta obodo China - Dongguan City.
Ọ bụ nchịkọta nyocha teknụzụ na mmepe, mmepụta, ire ahịa, ime ihe dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ nzuzo dị elu. N'ịdabere na azụmaahịa azụmaahịa na-emepụta akpaka akpaaka nke ụlọ ọrụ nne na nna, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala otu azụmaahịa azụmaahịa na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke nbipụta akara onwe ya, igwe kwụ ọtọ, igwe mpempe akwụkwọ akpaka, igwe nkwakọ ngwaahịa uwe nwere ọgụgụ isi na ihe ndị ọzọ. Na nzaghachi oku gọọmentị na iji nye aka na mgbochi na ịchịkwa ọrịa a, ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ịtọlite ​​ngalaba ọrụ igwe nkpuchi na 2020 wee nye akụrụngwa mmepụta nkpuchi maka ihe karịrị ụlọ ọrụ 2,000.
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ ahụ na -agbaso "sayensị na teknụzụ bụ nrụpụta dị ike" nke ebumnuche mmepe, "ịdị mma dị ka ọbara nke nlanarị ụlọ ọrụ", na -aga n'ihu na -enweta teknụzụ akpaaka dị elu nke ụlọ na nke mba ọzọ. ụdị ọhụrụ, bulie teknụzụ ịkpọ aha, gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na imepụta ihe ọhụrụ, yana ahụmịhe afọ 9 na imewe na imepụta ya, yana ezigbo akụrụngwa yana ọrụ azụmaahịa zuru oke, ya na ndị ahịa izugbe nkwado na nkwado, nwere mepụtara iji kpuchie mpaghara mita 8000, ndị ọrụ mmadụ 100 nwere akara pụrụ iche nke ụlọ nrụpụta buru ibu, bụrụ isi nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na -ahụ maka ịdebanye aha ọkachamara.
Akara akpaaka kemgbe etinyere ya, amatala ụlọ ọrụ n'ihu teknụzụ teknụzụ ịdebanye aha, ngụkọta nke ụdị igwe ịdebanye aha ihe karịrị 100, ngwaahịa gụnyere usoro igwe akara karama okirikiri, usoro igwe na -edetu akara, usoro igwe na -edenye aha n'akụkụ, na igwe na -esote. usoro, usoro igwe na-ebipụta akwụkwọ ntanetị, usoro nyocha igwe na-ebipụta ngwa ngwa, usoro igwe na-edenye aha nke ọma, wdg, nwere nke ọma maka kemịkalụ kwa ụbọchị, ọgwụ, nri, mmanya, elektrọnị, ngwaike, ụgbọ ala, ibi akwụkwọ, plastik, ọdịbendị na agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke narị narị ndị ahịa na -arụ ọrụ, iji nweta akpaaka nke ngwaahịa dị iche iche na -edenye mgbanwe, maka mmepe nke akpaaka na China enyela onyinye kwesịrị ekwesị.
Na mgbakwunye na imepụta igwe eji eme akara ọdịnala, imepụta, ire ahịa, wdg, ụlọ ọrụ ahụ na -eleba anya na nyocha na mmepe nke ụdị ọhụrụ, na 2013, ụlọ ọrụ ahụ na -etinye ego dị ukwuu na akụrụngwa maka ụdị nyocha ọhụrụ. na mmepe, emebela nke ọma igwe igwe na-edebanye aha ịnweta mmiri, igwe na-ebi akwụkwọ ozugbo, igwe na-ede ihe nkenke dị elu, igwe na-ahazi akara ngosi dị elu, igwe na-echebe ihe nkiri ekwentị mkpanaka, wdg, nyocha na mmepe nke sistemụ nbipụta ozugbo, slid igwe akpọrọ ahaziri nke ọma na onye na-eme ihe nrịba ama nke nwere nkọwa zuru oke ejupụtala oghere dị na ụlọ ọrụ ahụ!
Huan Lian, na -arụ ọrụ nkeonwe gị ahịrị mmepụta; Họrọ Huan Lian, mee onye ọkachamara ọkachamara akụrụngwa gị!
Ka anyị rụkọọ ọrụ ọnụ iji mepụta amamiihe, na -atụ anya iso gị rụkọọ ọrụ ọnụ!
Onye na -enyocha karama, Igwe nyocha akara, Ngwa mbukota akwa, Onye na -enyocha karama, Onye na -enyocha karama mmanya, Onye na -enyocha karama biya,